Voankazo sy legioma manasa-dalana Processing Machine - China Qingdao milina tapaka
Hot Feed fingotra Extruding Machine
Computer Control Tsanganana Type fingotra Vulcanizer
Fingotra Conveyor fehin Vulcanizers Welding Machine
Voankazo sy legioma ny fisasana Processing Machine-dalana, dia mitroka ao amin'ny legioma fanodinana nandroso World Wide foto-kevitra, miaraka amin'ny ankamaroan'ny tanàna ao an-toerana Shina legioma sy / na fanodinana voankazo famokarana. Lasa ny rehetra izahay tsipika ny legioma fitaovana fanodinana voankazo. Ny fitaovana teknolojia dia matotra. Legioma no nanadio, naka, manapaka legioma, disinfected, notrohinao mbamin'ny faikany, ary rehefa afaka henjana fitiliana, miditra amin'ny mponina tsena kely fonosana, ka mandehana ho any amin'ny cantine tsena lehibe t ...
Voankazo sy legioma ny fisasana Processing Machine-dalana, dia mitroka ao amin'ny legioma fanodinana nandroso World Wide foto-kevitra, miaraka amin'ny ankamaroan'ny tanàna ao an-toerana Shina legioma sy / na fanodinana voankazo famokarana. Lasa ny rehetra izahay tsipika ny legioma fitaovana fanodinana voankazo.
Ny fitaovana teknolojia dia matotra.
Legioma no nanadio, naka, manapaka legioma, disinfected, notrohinao mbamin'ny faikany, ary rehefa afaka henjana fitiliana, miditra amin'ny mponina tsena kely fonosana, ka mandehana ho any amin'ny cantine tsena lehibe entana.
Taorian'ny fikarakarana, ny legioma sy ny voankazo dia ny endri-javatra ny madio, fahadiovana, mety sy azo antoka sns
Ny famokarana tsipika dia azo ampiasaina mba fandraisana: laisoa, legioma, soflera, salady, karaoty, holatra, maitso peppers, ovy, baranjely, tsaramaso maitso, pitipoà sy ny legioma.
Ny milina na ny fanaka avo lenta SUS304 Stainless vy, mifanaraka amin'ny fenitra-pirenena sakafo orinasa, ny famokarana horonan-taratasy tsipika mandany fefy / kirihitra / rano dipoavatra teknolojia mba cleam ny anana sy ny voankazo ho an'ny araka lehibe indrindra.
Ny milina ao amin'ny andalana, ny hahavony dia Adjustable amin'ny alalan'ny fanitsiana ny casters / rihana kodia, oksizenina paompy mandatsa-dranomaso, ka ny rano ka manjary miboiboika feno mijery tahaka ny nahandro. Ny vibrate ny manjary miboiboika mamokatra
fitarafana, toy izany koa ny legioma sy ny voankazo dia afaka hahazo madio amin'ny alalan'ny handratra ny tenany.
Famonoana mikraoba tsipika: famonoana mikraoba ny azo natao ka napetrany araka ny mpanjifa 'antsipirihany fepetra. Amin'ny alalan'ny price sy ny rano fandroana, manao ny anana sy ny voankazo mihaona fanondranana fenitra.
Sprinkler / price tsipika: madio faharoa taorian'ny famonoana mikraoba, afa-tsy rano ho an'ny rano dipoavatra.
Namaoka tsipika; Ny vokatra haingana mahazo paharitry, mba hisorohana ny fandotoana faharoa aorian'ny famonoana mikraoba.
Araka ny mpampiasa 'fepetra hanampy Ozone hiteraka, tsindry ambony dipoavatra sy ny borosy hifindra fahalotoana / Miscellaneous.
Rehefa desalination fampiasana toy ny fanadiovana, afaka mampiasa milina maro napetraka hitondra ny samy hafa karazana legioma sy ny voankazo.
Previous: Hot rano mangotraka Tank Machine
Manaraka: Pot telo Parallel Processing Type Sakafo avalin'izy Machine
ara-barotra legioma milina fanasan-damba
katsaka fikarakarana fitaovana
katsaka fikarakarana milina
daty fikarakarana tsipika
daty fikarakarana fototra
vaovao l eafy fototeny legioma milina fanasan-damba fanodinana milina tsipika
voankazo legioma vaovao daty milina fanasan-paharitry fanadiovana
voankazo sy legioma fanadiovana paharitry tsipika
voankazo legioma fanodinana milina fanasan-paharitry mitontongana milina
an-trano legioma milina fanasan-damba
ravina legioma milina fanasan-damba
toeram-pisakafoanana legioma milina fanasan-damba
faka legioma milina fanasan-damba
kely legioma milina fanasan-damba
mamy vary fikarakarana milina
legioma sy ny voankazo milina fanasan-damba
legioma voankazo milina fanasan-damba
legioma milina fanasan-damba vidin'ny
legioma milina fanasan-damba amin'ny Ozone